Nezvedu - Liaocheng Kunmei Kupa Co., Ltd.
Liaocheng Kunmei Kupa Co., Ltd.iri iri Linqing City, Shandong Province, iro rine "Hometown Bearings mu China". Iyo indasitiri inotakura inogadzirwa pano uye zvigadzirwa zvinokurumidza. Yakagadzwa muna 2001, kambani inobereka inogadzira inobatanidza R & D, dhizaini, kugadzira uye kutengesa.
Iyo kambani ine akati wandei epamberi otomatiki ekugadzira mitsara uye yekuyedza michina. Kune nyanzvi yeR & D vashandi uye vane hunyanzvi hwekugadzira timu. Tevedzera yepamusoro michina. Gadzira mhando yepamusoro uye yepamusoro chaiyo yakadzika groove bhora mabheyaringi, piro block block, tapered roller mabheyari uye idenderedzwa roller mabheyari mukuomerera zvinoenderana nenyika zviyero. Yepamberi yekuyedza michina uye yakaomesesa bvunzo kuyedza, hunyambiri kuyedza zvinoreva kuverengera mhando yega yega yezvigadzirwa, zvigadzirwa zvinotengesa mushe muChina uye zvinotumirwa kuEurope neUnited States neRussia, Malaysia, Singapore, India, nezvimwewo Nyika nematunhu. Yakarumbidzwa neruzhinji rwevatengi.
Panguva imwecheteyo, kambani iyi inogoverawo akakurumbira marita mabheyari evakuru vanogadzira muSweden, Germany, United States, Japan nedzimwe nyika. Iyo kambani ine simba rakasimba, yakakwana mhando uye mamodheru, uye zvakakwana huwandu. Iko kugovera kuri panguva uye kunowanikwa kune vatengi pamutengo wakanakisa.
KM inobereka zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mune zvekurima michina, mota, turbines emhepo, simbi, kuchera, peturu, makemikari, marasha, simende, bepa, rinorema michina uye mamwe maindasitiri.
"Kutarisa kune udzame, kutsvaga kwembiri" huzivi hwedu. Regai kuedza kwedu kuwirirane nenyika. Kuhwina-kuhwina nevatengi.
gadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, sevhisi nemoyo wese, gadzira mabhenefiti
kubatana, kuvimbika, hushamwari, kushingaira, kuita
Rarama mukupona kwakanaka, kukura muhunhu
Liaocheng Kunmei Kubereka Co., Ltd.
Iyo huru bhizinesi chiyero
Wholesale nekutengesa mabheyari uye zvishongedzo, mafuta ekuzora, mota yemagetsi uye zvigadzirwa zverabha
Unyanzvi hunotakura hwekugadzira ruzivo, simba rakaona iyo mhando.
Gadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye upe basa rakanakisa.
Yakakwana Mushure mekutengesa Service
Ipai vatengi nezviri nyore services.